Ekugqibeleni, ndikhululekile !!! -Geofumadas
NgoDisemba, 2009 egeomates My, Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Ibe yinyanga enzima kakhulu, yonke into yokufuna ukushiya iinkqubo zolawulo zivaliwe. Namhlanje, emva kokuba ndiyokuthatha ipasile yokugqibela eyayilindile, ndahlala phantsi okomzuzwana ukonwabela loo mvakalelo yokugqiba izinto kakuhle, nangaphezulu kokuziva ndonwabile, ndandingonwabanga ngento eyenzeke kum kudala . Ndidlule kwi-espresso yekofu, kwaye ngelixa la magwebu ayenzakaliswa sisiqingatha sesipuni seswekile ndaziva ukuba uvakalelo lwam 8.4166666 Juni.
Iminyaka emibili edlulileyo yatshintshile amaxesha amathathu kwindawo, ukusuka kwintsimi efihliweyo kwimida Umlambo waseAraute, emva kokuba umkhosi uqalise iiplani zezibhamu zokuphelisa naluphi na uphawu lobomi kuluntu Tule y Iinjongo.
Emva kokuqhushumba isidlo sasemini, saphuma siphethe iisutikheyisi ezikhaphukhaphu kubunzima obuya kuvumela ukuba kuqhutywe isiqingatha se-trot, ipaseji ebiyelwe ngocingo oluhlabayo kunye nokutsiba kweengcango zebar. Ngeenja ezine kwaye enye yeekati ezintathu sawela Llano de Vargas, emva kweempawu ezishiywe sisihlwele sasebusuku; Kwakukho izicathulo zerabha endleleni, zithatyathwa ngokukhawuleza kunye nodaka lwaloo qela elinesibindi kwi-odyssey ebusuku.
Ukujonga emva kwakufana neli bali malunga nokuphela UKumkani uBera, umsi wenyuka kwiindlu ezitsha zaqhutyelwa ibhomu, kwiingubo ze El Machetón, phi Hernández, ngapha nangapha The Finch, ngenxa Trapiche. Kwakukho nje ithemba lokuba aba bantu banamaqhinga okungabinasidlo sasemini ngaphakathi ezindlwini zabo, kuba iinqwelomoya zajika umsi ophuma emakhitshini waba ziithagethi ezifanelekileyo.
Ndaye ndafika kwikhaya lesibini, isikolo besivalwe ngocango ukusukela ngeyeSilimela, emva kokuba bebulele utishala onamehlo amahle, basinika uhambo kwaye bacela inceba ukuba singanyanzelisi. Iindonga zazinemiyalezo evela kwi NgoFebruwari 28 iLague Popular; esangweni isithanga esiboshwe ngentambo ethambileyo kunye nesambatho esibomvu esasibekwe kwiflagpole sithe konke.
Emva kweenyanga ezintathu zemizamo, ekugqibeleni sifike emngceleni, apho sasibalekela khona kwindlu encinci kwaye, ngemini emini, kwi-4 PM sasisephakathi kwebhuloho Goascorán ndilinde umama ukuba afike nelo phepha liqinisekisa ukuba isivumelwano soxolo phakathi kwala mazwe mabini sisayiniwe kwaye singangeniswa. Senze malunga neenqwelo moya ezingama-37 esazisungula ukusuka kwibhulorho, de iphepha lokugqibela lam lamabali lagqitywa; Ndifuna ukuyenza kunye ne-paste kodwa ubunzima bayo babuzokundenza uzipho.
Ekugqibeleni impendulo yafika, nje xa kwakukho imali yokutya iintsuku ezimbini kunye nokuthutha okuya kusiyisa kwikedlana elincinci elibizwa ngokuthi ZeMigodi yeGold. Ndiwele umda ndinenye kuphela ityesi ebingathathwanga ngamapolisa, neepokotho zam zigcwele kuphela ithemba lelizwe elitsha, ootitshala abatsha, abezopolitiko abatsha; Ndiyazi ukuba izihlobo ezifileyo azinakufunyanwa, okanye ingqokelela yamatye e-obsidiya, kungasafani nencwadi yam yamabali abonisiweyo.
tan yoyikekayo ha sido inyanga yokugqibela, indlela ezothusayo ngayo inkululeko, i-8 post post yenze ukuba ndizizwe ndingenalutho, ngoku ukuba umongameli wabafundi efuna ukwakha umanyano, hehe. Uhambile lo nyaka nge ukubetha, ubunzima bezoqoqosho, iphulo lezopolitiko, incasa embi yomsebenzi wasentsimini. Umntu omtsha uza kwenza izinto ezinkulu, enamagcisa amabini endiwagcinayo, okona kulungileyo ukuba le ngxaki ayithathanga kum kwaye ndibeka izandla zam emlilweni kuba ndiyazi ukuba (kwaye bayenzile) ngam.
Eyona nto ibhetele, abaphathi be-16, ngubani ba khutshiwe phakathi kweengcali ze-230 eziqeqeshiwe, eziye zavavanywa ngeenyanga ezintandathu kwizikhundla zabo zobuchwepheshe, uxanduva, iimpawu zokuziphatha kunye fang ebomini. Kubo, ubuncinci i-10, bazimisele kwiminyaka yabo yobudala ukuba bangashiyi amantombazana akhulelweyo okanye amadoda aphuke intliziyo kwiindawo ezingenabungangamsha apho babethunyelwe khona, kuboniswe ukuba zenziwe ngomthi ofanayo nabahlohli babo, bezimisele sihlale siphapheme ukuba kuyimfuneko yokwenza ukuvalwa komhla kwaye ulwe de ufumane oko dangle que la ucoceko lwengqondo Ndifuna.
Kuya kubakho ixesha lokwenza izinto ezinkulu naba bafana kule minyaka ingama-25 izayo. Okwangoku, enkosi ngokulinda iiveki ezi-3 zempendulo, iintsuku ezi-4 zeposti entsha kunye nemizuzu eyi-1 yokufumana esi sithuba.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Ndodana yam kunye nezinto zakhe
Post Next Iimpawu ze-5 zemibaOkulandelayo »
4 uphendula "Ekugqibeleni, ndikhululekile !!!"
Ngamanye amaxesha ndibuyela kule post, unyaka emva kwexesha, ndingathanda ukuphinda ndiyibhale. Ndiyaqonda ukuba elinye lamaxesha ambalwa ndishwankathele ibali lam ngamazwi angaphantsi kwama 600.
Ndiyayithanda, ndiyazithanda izakhono zoncwadi onazo. Indoda, njengomntu, kufuneka ibandakanyeke kuqeqesho lwayo. Ubuchwephesha, okomoya, umntu, yonke into ... kufuneka ihambisane nesosayensi, ingcali.
Kule thunda ndikunika unomvulo ngokusithokozisa ngamava abantwana bakho, umsebenzi wakho, ukuzonwabisa kwakho, izinto ozizonwabisa ngazo.
Njengoko kuboniswe kwidonga yesiginesha:
"Ndihlala ndinento esele ndiyenzile, ngekhe ndenze kwanto, uJulio César." Kwimeko yakho, uxolo lufikile, kodwa ndiyazi ukuba ngenxa yexhala, ukucocwa kwemixholo, uhlala uhleli ngehamile, uhlala ukhona.
Ndiyakhuthaza, nangona ngamanye amaxesha ukuthula kubonakala kukuchasene, ukuqhubeka nokubhala kuba sininzi abantu abakufundayo. Akusoloko iimpendulo okanye iimpendulo zibonisa inkcazo yempendulo yomfundi, ngamanye amaxesha, ukunyaniseka kukukhansela ukuphendula.
AmaHholide avuyayo kubo bonke kwaye i2010 elandelayo ilungile, ingaba lula kangakanani, ukuba lo usishiya
Ndiyabulela umhlobo, ndiyathemba ukuba uphumle.
... Ndiyathemba ukuba ndinolwaneliseko olufanayo oluvela kuwe lomsebenzi ogqityiweyo, kuba siphakathi kwimfazwe yolwazi kwaye siyayiqinisekisa (yolwazi) yinto eyoyikisayo, phakathi kwayo ndiyilwimi endaweni yomhlalutyi.
Ndiyakuvuyela ukuba uphumle, uyisebenzise, ​​uyigcine (uxolele i-tildes ekhohliweyo) kwaye ujabulele abantwana bakho. Baya kuba ne-2010 geofumadas.
Izibingelelo ezivela eChile